Izidakamizwa "Lansoprazole": yokusetshenziswa, intengo, analogs kanye nokubuyekeza
Omunye pathologies ezivame kakhulu ipheshana wokugaya ukudla kuyinto isifo esidalwa yizilonda emathunjini sibe. It kuvela ngenxa ukusebenza kahle ka ipheshana wokugaya ukudla, lapho kukhona luphakanyiswa uketshezi of ayo esiswini noma kwehle ukungawi lwamafinyila. Pathology esiyingozi ngokwanele njengoba kungaholela yezinkinga okunzima ukopha zangaphakathi, perforation of isilonda, umdlavuza esiswini. Yingakho iziguli ezinalesi sifo kudingeka ukwelashwa okufanelekile. Umuthi esisiza ekwelapheni lesi sifo lesi sidakamizwa "Lansoprazole". Yokusetshenziswa uchaza ithuluzi njengenhlangano izidakamizwa anti-isilonda.
Medicine "Lansoprazole" imfundo manual ukuma njengoba nomuthi for ekwelapheni izilonda.
Umuthi ingena phakathi ipheshana wokugaya ukudla has Fusion Ilokhi hydrochloric acid esinyathelweni sokugcina. Umzimba izidakamizwa wenziwa endaweni kwamaseli parietal. Lokhu kubangela ukwakheka asebenzayo sulfanomidnyh nemikhiqizo. Bona kunethonya braking ukukhiqizwa acid. Kungakhathaliseki ubunjalo imithi umfutho kusiza ukuphungula uketshezi busebenza futhi basal.
Umuthi kuvimbela ekwandeni isilonda lwegciwane - bacterium Helicobacter pylori. I nomuthi inikeza nokwanda kokungabi omzimba athile a silwanyana ekhona mucosa. Ngakho, lesi sidakamizwa kuqinisekisa nokuqedwa Helicobacter pylori.
Izidakamizwa "Lansoprazole" akunamthelela le motility pheshana emathunjini. The best ukusebenza (ukukhiqizwa acid encishisiwe) ebonwe izinsuku zokuqala ezimbalwa yokwelapha. Umthelela omuhle umzimba inakekelwa amahora 40 emva ukuhoxiswa nomuthi.
It ephawula izidakamizwa "Lansoprazole" imfundo manual. Inani lentengo lomuthi liphansi, kodwa mayelana kuzoxoxwa kamuva.
Made imithi ngesimo amaphilisi, ngamunye ehlanganisa 30 mg lomcebo asebenzayo.
izidakamizwa letiphakanyisiwe "Lansoprazole" ngaphansi kwanoma iyiphi pathologies? Yokusetshenziswa weluleka linqume ukuba iziguli izifo wokugaya ukudla. Imithi ukusiza nge izifo ezenzeka isigaba chronic oyingozi.
I izinkomba enkulu omuthi zokugula ehlosiwe:
GI izifo isilonda;
erosive futhi esophagitis esidalwa yizilonda emathunjini sibe;
erosive kanye izilonda emathunjini yokusetshenziswa pheshana emathunjini, senziwa yokwelapha ama-NSAID;
erosive futhi umonakalo esidalwa yizilonda emathunjini sibe emathunjini kubangelwa Helicobacter pylori.
Izidakamizwa "Lansoprazole 'ebekwe ukumuncwa ezahlukene. Lokhu kahle kungenzeka kancane encishisiwe uma imithi esetshenziswa ngenkathi bedla. Ngesikhathi esifanayo, kungakhathaliseki ukuthi ukudla, uketshezi esiswini engasenamahloni.
Ubuningi esiphezulu "Lansoprazole" kusho waphawula ngemva 1.5 amahora.
Umuthi kahle asuswe emzimbeni amathumbu nezinso. Lokhu kufanele sizikhumbule uma isiguli sifuna zokugula ezithile. Ngokwesibonelo, abantu abaphethwe nokwehluleka ukusebenza kwezinso, kubalulekile ukuqonda ukuthi ukuhoxiswa izidakamizwa kuyoba isikhathi eside.
Lo muthi kufanele aqokwe udokotela ukuba khona. Ngeke sithathe kudingekile ukwelashwa isikimu bese anqume isilinganiso ezifanele zomuthi "Lansoprazole".
Yokusetshenziswa, izincomo ezilandelayo ukuthola izimali:
Emhlanganweni exacerbation of peptic isilonda isifo duodenum kunconywa ukuthatha amasonto 2-4 kuya ku-30 mg zomuthi ngosuku. Ukuze amacala nemithi, umthamo wansuku zonke kwandisa ukuba mg 60.
Okubi kakhulu of isilonda esiswini noma erosive futhi esophagitis esidalwa yizilonda emathunjini sibe kudinga Yiqiniso 4-8 ngesonto yokwelashwa. Iziguli ezinjalo iqondiswa 30-60 mg ngosuku.
Shock syndrome kubangelwa NSAID, iphathwa amasonto 4-8. Umthamo nsuku zonke 30 mg.
Ukususwa Helicobacter pylori. Kulokhu, lo nqubo yokwelapha ithatha izinsuku 10-14. Isiguli sabelwe izikhathi 2 ngosuku ukuthatha 30 mg. Ngokuvamile, lesi sidakamizwa "Lansoprazole" kuhlangene izidakamizwa elwa namagciwane.
ukuphathwa Zokuzivikela izilonda peptic kudinga ukuqashwa kwalaba abalandelayo. Isiguli kufanele uthathe 30 mg zomuthi nsuku zonke.
Anti-ekwelapheni Reflux oesophagitis uqhutshwa ngendlela elandelayo. Isiguli sithola nsuku zonke 30 mg. Lokhu indlela yokuyelapha okuhlala kakhulu. Lungafinyelela izinyanga 6.
Ukuze ekwelapheni Zollinger-Ellison syndrome esigulini ngasinye the umthamo kushintshwe ngamunye.
Ungakhohlwa ukuthi imithi kungabangela ukusabela engadingeki. Ngakho-ke kubalulekile ukuba sinake isimo sempilo ngesikhathi yokwelapha. Futhi uma ubona ukubonakaliswa negative, qiniseka bonana nodokotela wakho kuqala. Phela, kuphela uchwepheshe bangakhetha lesi sidakamizwa "Lansoprazole" nozakwabo.
Ngakho, cabanga ngenkulumo elandelayo kubangela eziningi side effects:
CNS. Kungenzeka ikhanda. Kakhulu akuvamile, iziguli zibhekene nokugula, isiyezi, ukozela, ukucindezeleka kwengqondo, ukukhathazeka.
Isimiso sokugaya ukudla bungene. Kwabanye abantu, kukhona ukwehla noma ukwanda ngesifiso, isicanucanu futhi ngikhishwe ubuhlungu besisu. Ezimweni ezingavamile, umuthi kuphakamisa uhudo, ukuqunjelwa. Kukhona amacala angawodwa lapho iziguli candidiasis emathunjini, izilonda emathunjini, kukhuphuke isibindi transaminase umsebenzi, hyperbilirubinemia sitholakale.
uhlelo zokuphefumula. Izidakamizwa kungabangela ukukhwehlela, pharyngitis, rhinitis, elingenhla pheshana ukutheleleka, emuva kokutshengisa izimpawu zomkhuhlane.
uhlelo hematopoietic. Ngezikhathi ezithile, iziguli zingase zibe thrombocytopenia. Pathology has oluhambisana ukubonakaliswa. Kakhulu akuvamile kwatholakala ukuthi banesifo sokuntuleka kwegazi.
ukubonakaliswa nomzimba. Ungase wamukele ukuqubuka kwesikhumba. Kwezinye iziguli waphawula photosensitivity, futhi erythema multiforme.
Nezinye izindlela zokusabela. Ezimweni ezingavamile, umuthi kuholela ukubukeka myalgia, Alopecia.
Medicine aluboniswa ngoba pathologies ezithile nemibandela. Ngokusho imiyalelo, imithi ine Izimo ezilandelayo:
izimila abulalayo endaweni esiswini;
senyanga yokuqala nokukhulelwa;
ebuntwaneni - leli thuluzi is hhayi Kunconywa kufika eminyakeni engu-18;
Ezinye iziguli badinga ukunakekelwa okukhethekile phakathi ukwelashwa nale izidakamizwa. Kuleli qembu iziguli zihlanganisa:
Iziguli esingamahlalakhona kwezinso;
kwabesifazane abakhulelwe (trimesters 2 kanye 3rd);
abantu yokwehluleka kwesibindi.
Cabanga ngalokho ube izidakamizwa "Lansoprazole" omqondofana. Pharmacologists baphikisa ngokuthi imithi enjalo ikhambi "Lanzap".
Nokho, zikhona nezinye izidakamizwa ukuthi ungakwazi ukushintsha i-ejenti yokuqala, uma kunesidingo.
Ngakho, hlobo luni izidakamizwa "Lansoprazole" nozakwabo? Ziyakwazi:
Zonke lezi imithi zisekelwe ketshezi asebenzayo efanayo.
Izidakamizwa "Lansoprazole": Intengo
Yeka ukuthi kuyinto izindleko iziguli "Lansoprazole"? Intengo kuhluka ruble 115 kuya 175. Njengoba ubona, ithuluzi akakwazi ngokuthi ezibizayo.
On the ukulungiselela "Lansoprazole" Izibuyekezo lingama omuhle. Abantu zisikisela ukuthi sidakamizwa sisiza ukwazi indlela yokubhekana ngokuphumelela ne pathologies ezihlukahlukene pheshana emathunjini. Kusho okukhulu ekuqedeni izimpawu okubuhlungu pancreatitis, kolwelwesi. Imithi kushintsha izimpawu of isilungulela.
Iziguli unake okukhethekile izindleko nemithi. Ngemva izidakamizwa kungokwalabo izimali ezishibhile, kodwa kuba nethonya kakhulu zokwelapha neze kunabayeni kunemifuziselo ezibizayo.
"Biotredin" noma "Glycine" - okuyinto engcono? Yokusetshenziswa, intengo, kanye nokubuyekeza. izinkomba
Tablets "sodium Fuzidin": yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
Izidakamizwa "Dimexidum". Sebenzisa therapy eqeda ukuvuvukala
Indlela ukukhetha kwesokudla sine?
Analgesic Ngempumelelo "Ketanov": yokusetshenziswa
Medicine 'Cereton'. Yokusetshenziswa
Yiziphi izidakamizwa eqeda ukuvuvukala elisetshenziswa zabesifazane manje?
Idivayisi kwikhompyutha Eziyisisekelo
Amaqiniso ethakazelisayo iso womuntu futhi umbono
Wesibeletho leukoplakia precancerous kungaba
Yakov Gordin: Biography, izithombe kanye nokubuyekeza
Botanik Ihhotela kuyona (Turkey, Kemer). incazelo ehhotela, abahambi Izibuyekezo
Izitshalo cruciferous nezici zabo
"Nokuzwelana": "Skyrim". ndima imfuno
Indlela Yokuphefumula Ngokufanele Lapho Ugijima
Amacebiso awusizo sendlela ukulingana isikhafu ehlobo ngoba amantombazane crocheted
Kwezinye izimo, svchost imithwalo processor